Tahirintsary hafa - 17/08/2015 17:00:20 - Namana Serasera.org
Eto ianao : Fandraisana > Album
Tahirintsary hafa - 17/08/2015 17:00:20
Nampidirin'i : Rafieritreretana
Tahirintsary: Tahirintsary hafa
Nampidirina ny : 17/08/2015 19:00:20
Nitsidika : 2758
Miverina amin'ny tahirintsary
1. Rafieritreretana 17/08/2015 19:14:32
Vous, vous serez perdu en enfer si vous n'etes pas evec Yahoshuah car Il est le vrai DIEU
Jean 4:22 Il est Juif
Psaume 68:5 Il porte le nom de son Pére YAH, lire la Bible Hebreu
Act 4:12 le nom de Yahoshuah ne peut etre change
Jean 12:49-50 Ces paroles sont des lois qu'on ne peut enfreindre
--> Jesus, Jesoa, Jesosy, Zezo, Yesua, Yeshoshuah, Yeshuah sont faux car ils ne sont autre que le dieu Grec Zeus
C'est la doctrine de Yahoshuah enseignee par Episcope Samuelson Edward
Ecoutez Radio Tv HFF Tv:
L'enseignement debutera le Jeudi 20 Aout 2015.
2. stahtam 31/08/2015 07:48:50
Ho antsika liana te-hahalala fahamarinana dia mba misarika ny saintsika rehetra aho handinika ny Jaona 4 etsy ambony izay nanorenan'i Rafieritreretana finoana. Io lahatsoratra io dia milaza fa ny hafa firenena dia mivavaka amin'izay tsy fantany fa ny Jiosy no mivavaka amin'izay fantany! Ity fivavahana voalaza fa mitondra doctrine (entin'i Episcope Samuelson Edward) ity anefa dia hafa firenena (malagasy) no mitarika azy, koa fantany ve izay ivavahany raha io Jaona 4 io no jerena? Moa tsy ny Jiosy ihany ve no mahalala ny anaran'ny Jiosy mpiray firenena aminy? Am-bava homana...
3. inajad 11/09/2015 07:52:54
firy ny mari drefin onjam-peo ( frequence ) ahafahana mihaino ny fandaharana.
@Rafieritreretana - Tsy mandeha ny rohy nomenao eo amboni.
4. Prime 24/09/2015 11:41:02
Fanamarihana 4 no ataoko hatreto :
1. mahay teny hebreo ve ianao (Episcopo Samuelson Edouard) tompoko, raha eny dia mba mila fanazavàna lalina kokoa avy amin'ny teny hebreo avy aminao mikasika ny fampianarana entinao (satria ny dialekta maro sy ny litera ao amin'ny teny hebreo dia sady tsy misy "voyelle" [a] no sady tsy misy "voyelle" [o]) mahakasika ny anaran'i Kristy, raha tsia, dia miangavy anao tsy hanao fampianaran-diso satria ireo anarana marobe lazainao fa anaran'ny andriamanitra grika hoe Zeus dia tsy mitombina avokoa raha ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra voasoratra araka ny teny arameana sy teny hebreo
2. tsy YAH tompoko no anaran'Andriamanitra Ray (Salamo 68:5, baiboly dikan-teny avy amin'ny hebreo lazainao), Ilay Rain'ny mandrakizay, namorona ny tany sy ny lanitra, amin'ny teny hebreo, Ilay Masina indrindra sy tsy azo tononina fa YHWH, noho izany ny baiboly hebreo nakanao io anarana ambaranao io dia efa dikan-teny sahady ihany koa ka tsy afaka itompoana teny fantatra hoe izay ihany no tena anarany
3. ny anarana lazain'ny asan'ny Apostoly 4:12, dia tsy Yahoshuah ihany (mbola dikan-teny ihany koa avy amin'ny baiboly voalazanao) fa ny anaran'i Jesosy amin'ny teny arameana sy teny hebreo (izay samy manana ny fanononany azy isaky ny faritra sy ny vohitra any Israely, fa raha any Galilia ianao dia hafa ny fanoratana fa tsy ny fanononana ny anaran'i Jesosy, raha any Samaria ianao dia hafa ny fanoratana ny anaran'i Jesosy, raha any Jodia ianao dia hafa ny fanoratana ny anaran'i Jesosy, raha any Jerosalema ianao dia hafa ny fanoratana azy, fa ny itovian'ny rehetra hevitra dia na samy hafa aza ny fanoratana azy dia eken'ny ny nanoratra ny baiboly kristiana fa Jesoa Ilay Mesia), ka noho izany ny fitompoana teny fantatra fa Yahoshuah ihany no izy dia tsy ampy, izany hoe raha tena te-hahafantatra ny anaran'i Jesosy marina amin'ny fiteny fototra ianao dia mila miverina mamaky ny nanoratana azy marina araka ny fiteny arameana sy hebreo fa tsy dikan-teny fotsiny anankiray toa io (satria diso koa ny filazàna ohatra fa "Jesosy" ihany no tena anarany na tena Izy ohatra). Araka izany Ilay anaran'i Jesosy ambaran'ny boky, toko sy andininy io, dia Ilay anaran'ny Zanak'Andriamanitra, ahafantaran'ny rehetra Azy, amin'ny maha-Mesia Azy, ka tsy Ilay anarana ihany (tokana araka ny fanoratana hitanao io) no zava-dehibe fa indrindra koa ny asany (Titosy 1:16), manamarina Ilay anarana fiantsoana Azy, na Jesosy io na Jésus io na Jesus io na Yeshua io, na Yeshun, na Yahoshua io sns, ka raha jerena fotsiny ny anarany araka ny fiteny Galiliana izao dia Yeshun no iantsoany Azy (ilay misiona sy asan'i Jesosy no zava-dehibe ao anatin'io anarana io), tsy misy idiran'ny teny grika izany na fampianarana grika na dia kely aza
4. Mikasika ny Jaona 12:49-50 dia tsy ny anaran'i Jesosy na ny lalàny ihany akory no nananarany ny mpianatra tokony hotandremana sy hankatoavina amin'io boky, toko sy andininy voalazanao io, fa Izy tenany mihitsy sy ny mahaIzy Azy (légtimité, légalité, autorité feno ao Aminy amin'ny maha-Andriamanitra Azy avy amin'ny Ray na ihany koa Iraka Tokana Marina avy amin'Andriamanitra Ray), tamin'ny nidinany tety an-tany, ny asa misiona nanirahan'Andriamanitra Ray Azy ho tonga nofo sy ny fampianarany manontolo hatramin'ny nanorenany an'izao tontolo izao ka hatramin'ny mandrakizay, izay iorenan'ny asam-pamonjena nataony teo amin'ny hazofijaliana noho ny FITIAVANY an'izao tontolo izao, voalaza manomboka any amin'ny bokin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy, tokony inoana sy ekena ary hajaina avokoa, fa tsy noho ny anarany na noho ny lalàny ihany akory, noho izany ny baiboly manontolo no tian'i Jesosy ambara eo fa tsy fampianarana ao amin'ny anarany sy ny lalàny ihany akory.
Araka izany dia, ankasitrahana ianao mizara araka ny fandresen-dahatra ao anatinao, fa entiko amim-bavaka ianao handalina sy "hieritreritra" tsara (araka ilay anarana mahafinaritra entinao ato) ka hosokafan'Andriamanitra ny masom-panahinao, ka na tsy diso tanteraka aza ny fampianarana entinao dia mbola mila fandalinana ao amin'ny FITIAVAN'Andriamanitra mba handehananao amin'ny fanetren-tena ka tsy itsaranao ny hafa ho diso sy hanamarinanao tena fa ny anao ihany no marina raha hoy indrindra ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Velona sy Masina, manan-kery avy any Nazareta : « Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, » (II Timoty 3:16)
5. Rafieritreretana 15/10/2015 21:07:57
Miarahaba anareo indray ny tenako, ialana tsiny raha izao vao afaka mamaly anareo.
inajad manokana ity ny rohy vaovao fa nisy ny fanamboarana :
Ny mari-drefy indray:
Antananarivo: 97.2 fm
Mahajanga: 104 fm
Fianarantsoa: 104 fm
Toliara: 104 fm
Toamasina: 97.2 fm
Ambatondrazaka: 91.4 fm
"Ho tahin'ny Yahoshuah manokana anie ianao".
6. Rafieritreretana 15/10/2015 21:49:06
- stahtam, aza be fialonana hoaho :
Malagasy tokoa i Episkopo, saingy voairaka izy, ary manao ny asan'izay naniraka azy; mba fantatrao moa hoe tahaka ny ahoana no nifidianana azy: Araho kely ange ireto faminaniana ireo eh:
- Isaia 42:1-4/ 1Indro ny Mpanompoko, Izay tantanako, dia Ilay voafidiko sady sitraky ny foko Napetrako tao aminy ny Fanahiko; Hamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa Izy. 2Tsy hiantsoantso Izy, na hanandratra ny feony, na hanao izay handrenesana ny feony eny an-dalana. 3Tsy hotapahiny ny volotara torotoro, ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro manetona; Hamoaka izay tena rariny tokoa Izy. 4Tsy ho reraka na ho kivy Izy, Mandra-panoriny ny rariny amin'ny tany, ARY NY NOSY HIANDRY NY LALÀNY.
=> Raha tonga tao Israel Yahoshuah dia nisy lalàna naoriny (Fanekena Vaovao), ary any amin'ny NOSY no hivoaka izany lalàna izany (i Madagasikara ohatra dia Nosy, saingy afaka mbola tsy mino ianao)
Tsy nijanona eo amin'ilay hoe Nosy hiandry ny lalàny ilay teny, fa voasoratra hoe: "ery an-tendrombohitra" ==> (Ambohidrapeto izay misy ny Radio ampianaran'ny Episkopo dia Tendrombohitra ihany koa)
- Isaia 52:7/ 7Akory ny hatsaran'ny tongotr'iry mitondra teny soa mahafaly ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana! Dia izay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena...!
Ary hisy fampianarana hivoaka avy amin'izany NOSY izany, avy amin’izany TENDROMBOHITRA izany, isa-maraina, miverina ny atoandro, miverina ny alina ihany koa, ary raha vao mahare izany fampianarana izany ianao dia mangovitra:
- Isaia 28:19/ 19Ary na oviana na oviana no ihaviany, dia hahatratra anareo izany; Fa isa-maraina isa-maraina no hihaviany, na andro na alina; Ary ny vokatry ny fahafantarana izany fianarana izany dia fangovitana ihany.
Teny marina izany, saingy tsy ny rehetra no natao ho resilahatra amin'izany na dia maniry aza, Andriamanitra no mifidy, ary handalo sy hihelina tahaka ny zavona ihany izany fampianarana izany satria izany tokoa no tsi-maintsy izorany:
- Isaia 28:19-20/ 20Fa fohy loatra ny farafara ka tsy azon'ny olona ilamparana; Ary kely ny firakotra ka tsy maharakotra, raha misy te-hirakotra azy.
KOA REHEFA TANTERAKA TETO AMIN'ITY NOSY ITY IZANY FAHATSARAN'ANDRIAMANITRA IZANY, ary ankehitriny efa misandrahaka maneran-tany amin'ny alalan'ny Radio-Télévision/internet :
Dia MIOMANA kosa ianao ry zanak'olombelona...??? MADIVA DIA MADIVA NY FARANY, Ary Andriamanitra tsy mitaona olona mba hino azy velively, fa ny olona no mila mitady Azy. Koa raha maneran-tany ankehitriny ny fampianaran'i YAHOSHUAH dia tsarovy fa HO VAVOLOMELONA no dika'iny:
- Matio 24:14/ 14Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran' ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany.
7. Rafieritreretana 15/10/2015 22:25:07
- Prime ...!
Episkopo tsy nirahina hampianatra teny hebreo velively. Saingy tonga kosa ny fotoany sy ny fahefany dia izay tsy mbola renao tamin'ny olona no tsi-maintsy renesin'ny sofinao, mahazaka ianao tsara... tsy mahazaka kosa ianao dia izao mba mamoaka izay ao am-ponao izao, na ho any na tsy ho any.
Tsarovy nareo mandrakariva anie, fa izany Episkopo izany tsy mitaona anao ho resilahatra amin'izay fampianarana toriny, tsy anjarany no manao izany. AMPY AZY REHEFA NAHARE NY SOFINAO.
=> Tsara ho marihina ihany koa fa ny taona 1995 Episkopo no vao nanomboka nandray ny asany araka ny ora sy ny fotoana voatendry; fa ny fampianaran'ny Demonia kosa efa 2000 taona no nanjakazaka teto ambon'ny tany taorian'ny nahafatesan'ny Apostoly sy ireo niaradia taminy izay nenjehana fatratra.
Noho izany, dia normale be ny famalinao sy izay mitovy hevitra aminao, saingy tsy hahafoana ny fahamarinana kosa anefa izany.
Lavinao marindrano ilay anarana YAHOSHUAH, tahaka izany ihany koa ny anaran'ny RAY (YAH), araka izany, dia tsy misy tokony hisy teny hifandaharantsika intsony, satria voasoratra hoe:
- IIKor 4:3-4/ Fa raha miafina ny filazantsaranay, dia miafina amin'izay ho very izany, izay nohajambain'ny andriamanitr'izao tontolo izao, dia ny sain'ny tsy mino, mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsaran'ny voninahitr'i Yahoshuah…
Ilazao aho rehefa misy mamaly :